समर्थन जुटाउन पाकिस्तानी विदेशमन्त्री चीन प्रस्थान
एजेन्सी । भारतीय सरकारले गत सोमबार देखी कश्मीरमा अतिरिक्त सैनिक परिचालन गर्दै संविधानको अनुच्छेद ३७० परिवर्तन गरेसँगै पाकिस्तानी सरकार ठूलो दबावमा परेको छ । भारतीय संविधान अनुसार, जम्मु कश्मीर राज्यल...
काठमाडौं । भारतको भारत प्रशासित कश्मीरमा गरिएका कडाइहरूबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । भारतले उक्त क्षेत्रमा गरेको कडाई प्रति राष्ट्रसंघले मानवअधिकार विपरित भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको हो । राष्ट्...
पाकिस्तानी आकाशमा भारतीय विमान उड्न मनाही !
एजेन्सी । भारतसँग व्यापारिक सम्बन्ध तोड्ने निर्णय गरेलगत्तै पाकिस्तानले आफ्नो हवाई क्षेत्रको एक करिडोर बन्द गरेको छ । व्यापारिक सम्बन्ध तोड्ने निर्णय बुधबार गरेको भए पनि आजदेखि एयरस्पेस बन्द गरेको हो...
अफगानिस्तानमा भूकम्प, पाकिस्तानमा पनि झट्का महसुस
एजेन्सी । अफगानिस्तानमा भूकम्पको झट्का महसुस गरिएको छ । अफगानिस्तानको हिन्दुकुश क्षेत्रमा गएको भूकम्पको केन्द्र काबुलबाट २४३ किलोमिटर रहेको संयुक्त राज्य भूगर्भीय सर्वेक्षणले जनाएको छ । बिहिबार विह...
उत्तर कोरियामाथि साइबर हमला गरी २ अर्ब डलर चोरेको आरोप
एजेन्सी । उत्तर कोरियामाथि साइबर हमला गरी २ अर्ब डलर चोरेको आरोप लगाइएको छ । उत्तर कोरियाले उच्चस्तरका साइबर आक्रमण गर्दै आफ्ना हातहतियार परियोजनाका लागि झन्डै दुई अर्ब डलर अवैध रूपमा जुटाएको आरोप गो...
कश्मीर घटनाले तात्दै गरेको पाकिस्तानी राजनीति !
एजेन्सी । भारत सरकारले जम्मु-कश्मीरका लागि संविधानमा गरिएको विशेष दर्जा गत आइतबार रातिदेखि खारेज गर्ने निर्णय गर्दै अतिरिक्त सुरक्षा फौजलाई परिचालन गर्यो । मन्त्रीपरिषदको बैठकपश्चात गत सोमबार विधान ...
बेलायत सरकार किन गर्दैछ ‘एउटा मौरी’को हत्या प्रयास ?
एजेन्सी । मधुकर जीव मानिने मौरीलाई मार्न सरकारले आदेश दियो । उक्त जीवलाई कैद गरि नष्ट गर्न सरकारले निर्णय नै बनायो । सफल हुन् भने सकिरहेको छैन । यद्दपी प्रयास अझै जारि छ । कहिल्यै यस्तो घटना सुन्नु...